Ny Volombavan’ny Saka | Nisy Namorona Ve?
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Goujrati Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kannada Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luvale Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Myama Norvezianina Népali Ourdou Pangasinan Pendjabi Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tseky Tsonga Twi Télougou Vietnamianina Waray-Waray Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Ny Volombavan’ny Saka
BIBY tia mandehandeha amin’ny alina ny saka. Ny volombavany no manampy azy rehefa ao anaty haizina, ka afaka misambotra voalavo, ohatra, izy, na mamantatra an’izay zavatra manodidina azy.
Diniho izao: Misy hozatra kely be dia be any amin’ny fakan’ny volombavan’ny saka. Henon’ireny hozatra ireny, na dia ny fitsokan’ny rivotra malefaka kely aza. Tonga dia fantatry ny saka àry raha vao misy zavatra eny amin’ny manodidina azy eny, na tsy hitany aza ilay izy. Tena ilainy izany ao anaty haizina.
Ny fitsokan’ny rivotra àry no ahafantaran’ny saka hoe aiza ho aiza no misy zavatra na biby, dia fantany koa hoe mihetsika ve ilay izy ary mankaiza. Ny volombavany no ahafantarany an’izany. Rehefa hiditra amin’ny toerana tery kely koa ilay saka, dia ny volombavany no amantarany raha ho antonona eo izy na tsia. Hoy anefa Ny Rakipahalalana Britannica (anglisy): “Tsy tena mazava hoe inona avy no asan’ny volombavan’ny saka. Fantatra fotsiny hoe mihena ny zavatra vitany, rehefa tapaka ny volombavany.”
Nanao robots misy volombava hoatran’ny an’ny saka ny mpahay siansa. Mahay miala amin’ny sakantsakana isan-karazany izy ireny. Nantsoin’ny manam-pahaizana hoe volombava elektronika ny volombavan’ireny robots ireny. Hoy i Ali Javey, avy ao amin’ny Oniversiten’i Kalifornia, any Berkeley: ‘Azo inoana fa be dia be no azo ampiasana an’ilay izy, na amin’ny fanamboarana milina tena raitra, na amin’ny resaka fitsaboana.’
Ahoana ny hevitrao? Vokatry ny evolisiona (na fiovana miandalana) ve ny volombavan’ny saka, sa nisy namorona?